संसदमा कांग्रेसले किन गर्यो हंगामा ? यस्तो छ रहस्य (भिडियो) | रिपोर्टर्स नेपाल
संसदमा कांग्रेसले किन गर्यो हंगामा ? यस्तो छ रहस्य (भिडियो)
२०७५ पुष २२ गते प्रकाशित, l २१:०४
पुष २२, काठमाण्डौ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न नदिइएको भन्दै रोष्टम घेराउ गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आईतबार संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिनु भएको वक्तव्यमाथि प्रश्न गर्न नदिएसम्म सदनको कार्वाही अघि बढन नदिने चेतावनी पनि दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ भन्दै कांग्रेसका सांसदहरुले रोष्टम घेराउ गरे । सार्वजनिक महत्वको बिषयमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । कांग्रेस सांसदको विरोधपछि सभामुखले सिमित सदस्यलाई प्रश्न गर्न समय दिएका थिए । तर कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले सिमित शव्द नराख्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
कांग्रेसका सांसदले लगातर विरोध गरेपछि सभामुख कृष्ण वहादुर महराले प्रश्न गर्ने कार्यक्रम नै हटाउनुभएको थियो । त्यसपछि पनि कांग्रेस सांसदहरुले सदनमा चर्को विरोध जनाएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षीले रोष्टम घेराउ गर्दा पनि समामुख महराले भने बैठकको कामकारवाही अघि बढाउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आईतबार संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिनु भएको वक्तव्यमाथि प्रश्न गर्न नदिएसम्म सदनको कार्वाही अघि बढन नदिने चेतावनी दिएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सदनमा सम्बोधन गर्न दिने तर विपक्षलाई प्रश्न गर्न नदिने सभामुख कृष्णबहादुर महराको एक पक्षीय व्यवहार नसच्चिएसम्म सदनको कार्वाही अघि बढन नदिने चेतावनी दिनु भएको हो ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का नेता झलनाथ खनालले पनि सदनभित्र प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न पाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाले सदनमा मुख्य भूमिका प्रतिपक्षी कै हुने भन्दै प्रतिपक्षीको भावनालाई सम्मान गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
त्यस्तै नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सदनमा प्रश्न गर्ने दिने वा नदिने भन्ने अधिकारी सभामुखलाई भएपनि लोकतान्त्रीक पद्धती अनुसार सदनमा खुल्ला बहस हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभा बैठक बुधबारसम्मका लागी स्थगीत भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अवरोधको प्रयास गरेपछि बुधबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो । सभामुखले त्यसपछि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेर छलफलको प्रयास गर्नुभएको थियो । तर पुनः बैठक बस्न सकेन । संसद सचिवालयले सुचना टाँस गरी बुधबार दिउँसो १ बजे अर्को बैठक बस्ने जनाएको छ ।